စားလို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ ကူဖီးလ် ကျောက်ကျောနဲ့ စီလုံလက်ဖက်ရည်ကျောက်ကျော – Zeekwat Hot News
May 17, 20190414
အိစံရဲ့ လွယ်ကူတဲ့ ကူဖီးလ် လုပ်နည်းလေးနဲ့ ကျောက်ကျောလုပ်နည်းလေးကို ပေါင်းစပ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ကူဖီးလ်ကျောက်ကျောကောင်းကောင်းလေးပါ။ ကူဖီးလ်လုပ်နည်းလိုမျိုးပေါင်မုန့် ထည့်တာမဟုတ်ပဲ မုန့် ကြွပ်ခြောက်ကို ထည့်ရပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ကို ထည့်ရင်ကျောက်ကျောအပူချိန်နှင့် ပေါင်မုန့် တွေအရည်ပျော်သွားပြီးမလိုင်လို မဖြစ်ပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့် မုန့် ကြွပ်ခြောက်ကိုသုံးထားပါတယ်။ လုပ်စားရအောင်နော်။
၁။ နို့ စိမ်း – ၂ ဗူး
၂။ နွားနို့ - နို့ စိမ်းဗူးခွံဖြင့် ချိန်ရ်ျ ၁ ခွက်
၃။ ရေ – နို့ စိမ်းဗူးခွံဖြင့် ချိန်ရ်ျ ၁ ခွက်ခွဲ
၄။ နို့ ဆီ – ၁ ဗူး
၅။ ကျောက်ကျော – ၂၅ ဂရမ် ၁ ထုပ်
၆။ မုန့် ကြွပ်မုန့် (bread crumbs) – ထမင်းစားဇွန်း ၈ ဇွန်း
၁။ ရေ ထမင်းစားဇွန်း ၈ဇွန်း ထဲကို ကျောက်ကျောမှုန့် ထည့်ရ်ျ ခဏထားပါ။
၂။ အိုးတခုထဲတွင် နို့ စိမ်း၊ နွားနို့ ၊ နို့ ဆီ၊ ရေ ၁ ခွက်တို့ ကိုထည့်ရ်ျ ပွက်အောင်တည်ပါ။ ပွက်ရင် ကျောက်ကျောမှုန့် စိမ်ထားတာကို ထည့်ရ်ျ အဆက်မပျက်မွှေရ်ျ ၁၅ မိနစ်ခန့် တည်ပါ။ ပြီးလျှင် မီးဖိုပေါ်မှချရ်ျ မုန့် ကြွပ်မှုန့် ကိုထည့်မွှေပါ။
၃။ ထို့ နောက် ဘန်းထဲထည့်ရ်ျ အအေးခံပါ။ အေးသွားလျှင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရွယ်လှီးရ်ျ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။
စီလုံလက်ဖက်ရည်လို့ဆိုလိုက်ရင် မလိုင်ဖတ်လေးတွေကို မျက်လုံးထဲတန်းမြင်သလိုပဲ အခုကျောက်ကျောလေးမှာလဲ မလိုင်ဖတ်လေးတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်နဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကိုစဉ်းစားမိချိန်မှာ ပထမတခါလုပ်တော့ အရသာပေါ့ပြီး နည်းနည်းမာသွားတယ်။ ဒါနဲ့ဒုတိယတခေါက်ထပ်လုပ်တယ်ပေါ့။ ဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ ကောင်းတာမှ ဘာပြောကောင်းမလဲ စားပြီးရင်းကိုစားချင်နေတော့တာပဲ။ လုပ်နည်းလေးကတော့ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
၁။ နွားနို့ – ၅၀၀ ml
၂။ ရေ – ၇၅၀ ml
၃။ ဒိန်ချဉ် – ထမင်းစားဇွန်း ၈ ဇွန်း
၄။ အာဂါးကျောက်ကျောမှုန့် – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းနှင့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း (အပြာရောင်အထုပ်ရဲ့တဝက်)
၅။ Happy Tea Mix လက်ဖက်ရည်မှုန့် – ၇ ထုပ် (တခါဖျော်စာအထုပ်)
၁။ Happy Tea Mix လက်ဖက်ရည်မှုန့် နှင့် အာဂါးကျောက်ကျောမှုန့်များကို ပန်းကန်တခုထဲမှာထည့်ပြီး သမအောင်လုပ်ထားပါ။
၂။ နွားနို့ကို ပူလာပြီး အငွေ့ထွက်လာသည်အထိတည်ပါ။ အငွေ့တွေထွက်လာလျှင် ဒိန်ချဉ်ကိုထည့်မွှေပါ။ ပွက်လာပြီးလျှင် အရည်သတ်သတ် မလိုင်ဖတ်သတ်သတ်ထွက်လာပါလိမ့်မည်။
၃။ အရည်နှင့် မလိုင်ဖတ်များသတ်သတ်ဆီဖြစ်လာလျှင် ရေ ကိုထည့်ရ်ျ ပွက်လာအောင်တည်ပါ။
၄။ ပွက်လာလျှင် ရောထားသော ကျောက်ကျောမှုန့်နှင့် လက်ဖက်ရည်မှုန့်များကိုထည့်မွှေပါ။ ၁၀ မိနစ်လောက်တည်ပြီးလျှင် ကျောက်ကျောလုပ်မည့်ဘန်းထဲကိုထည့်ရ်ျအအေးခံပါ။
၅။ အေးသွားလျှင် ကြိုက်နှစ်သက်သလိုလှီးရ်ျ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ာအိစံရဲ့ လှယျကူတဲ့ ကူဖီးလျ လုပျနညျးလေးနဲ့ ကြောကျကြောလုပျနညျးလေးကို ပေါငျးစပျပွီး ထှကျလာတဲ့ ကူဖီးလျကြောကျကြောကောငျးကောငျးလေးပါ။ ကူဖီးလျလုပျနညျးလိုမြိုးပေါငျမုနျ့ ထညျ့တာမဟုတျပဲ မုနျ့ ကွှပျခွောကျကို ထညျ့ရပါတယျ။ ပေါငျမုနျ့ကို ထညျ့ရငျကြောကျကြောအပူခြိနျနှငျ့ ပေါငျမုနျ့ တှအေရညျပြျောသှားပွီးမလိုငျလို မဖွဈပါဘူး။ အဲ့တာကွောငျ့ မုနျ့ ကွှပျခွောကျကိုသုံးထားပါတယျ။ လုပျစားရအောငျနျော။ပါဝငျသောပစ်စညျးမြား၁။ နို့ စိမျး – ၂ ဗူး၂။ နှားနို့ - နို့ စိမျးဗူးခှံဖွငျ့ ခြိနျရျြ ၁ ခှကျ၃။ ရေ – နို့ စိမျးဗူးခှံဖွငျ့ ခြိနျရျြ ၁ ခှကျခှဲ၎။ နို့ ဆီ – ၁ ဗူး၅။ ကြောကျကြော – ၂၅ ဂရမျ ၁ ထုပျ၆။ မုနျ့ ကွှပျမုနျ့ (bread crumbs) – ထမငျးစားဇှနျး ၈ ဇှနျး( ထမငျးစားဇှနျး = 1 tablespoon = 15 ml)ပွုလုပျနညျး၁။ ရေ ထမငျးစားဇှနျး ၈ဇှနျး ထဲကို ကြောကျကြောမှုနျ့ ထညျ့ရျြ ခဏထားပါ။၂။ အိုးတခုထဲတှငျ နို့ စိမျး၊ နှားနို့ ၊ နို့ ဆီ၊ ရေ ၁ ခှကျတို့ ကိုထညျ့ရျြ ပှကျအောငျတညျပါ။ ပှကျရငျ ကြောကျကြောမှုနျ့ စိမျထားတာကို ထညျ့ရျြ အဆကျမပကျြမှရျြေ ၁၅ မိနဈခနျ့ တညျပါ။ ပွီးလြှငျ မီးဖိုပျေါမှခရျြ မုနျ့ ကွှပျမှုနျ့ ကိုထညျ့မှပေါ။၃။ ထို့ နောကျ ဘနျးထဲထညျ့ရျြ အအေးခံပါ။ အေးသှားလြှငျ ကွိုကျနှဈသကျရာအရှယျလှီးရျြ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီရှငျ။
စီလုံလကျဖကျရညျလို့ဆိုလိုကျရငျ မလိုငျဖတျလေးတှကေို မကျြလုံးထဲတနျးမွငျသလိုပဲ အခုကြောကျကြောလေးမှာလဲ မလိုငျဖတျလေးတှနေဲ့ လကျဖကျရညျနဲ့ပေါငျးပွီး လုပျထားပါတယျ။ ဒီနညျးလေးကိုစဉျးစားမိခြိနျမှာ ပထမတခါလုပျတော့ အရသာပေါ့ပွီး နညျးနညျးမာသှားတယျ။ ဒါနဲ့ဒုတိယတခေါကျထပျလုပျတယျပေါ့။ ဒုတိယအကွိမျကတြော့ ကောငျးတာမှ ဘာပွောကောငျးမလဲ စားပွီးရငျးကိုစားခငျြနတေော့တာပဲ။ လုပျနညျးလေးကတော့ အရမျးလှယျကူပါတယျ။ လုပျစားကွညျ့ရအောငျနျော။ပါဝငျသောပစ်စညျးမြား (၈လကျမပတျလညျတဘနျးစာအတှကျ)၁။ နှားနို့ – ၅၀၀ ml၂။ ရေ – ၇၅၀ ml၃။ ဒိနျခဉျြ – ထမငျးစားဇှနျး ၈ ဇှနျး၎။ အာဂါးကြောကျကြောမှုနျ့ – ထမငျးစားဇှနျး ၁ ဇှနျးနှငျ့ လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး (အပွာရောငျအထုပျရဲ့တဝကျ)၅။ Happy Tea Mix လကျဖကျရညျမှုနျ့ – ၇ ထုပျ (တခါဖြျောစာအထုပျ)( ထမငျးစားဇှနျး ၁ ဇှနျး = 1 tablespoon= 15ml)(လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး = 1 teaspoon=5ml)ပွုလုပျနညျး၁။ Happy Tea Mix လကျဖကျရညျမှုနျ့ နှငျ့ အာဂါးကြောကျကြောမှုနျ့မြားကို ပနျးကနျတခုထဲမှာထညျ့ပွီး သမအောငျလုပျထားပါ။၂။ နှားနို့ကို ပူလာပွီး အငှထှေ့ကျလာသညျအထိတညျပါ။ အငှတှေ့ထှေကျလာလြှငျ ဒိနျခဉျြကိုထညျ့မှပေါ။ ပှကျလာပွီးလြှငျ အရညျသတျသတျ မလိုငျဖတျသတျသတျထှကျလာပါလိမျ့မညျ။၃။ အရညျနှငျ့ မလိုငျဖတျမြားသတျသတျဆီဖွဈလာလြှငျ ရေ ကိုထညျ့ရျြ ပှကျလာအောငျတညျပါ။၄။ ပှကျလာလြှငျ ရောထားသော ကြောကျကြောမှုနျ့နှငျ့ လကျဖကျရညျမှုနျ့မြားကိုထညျ့မှပေါ။ ၁၀ မိနဈလောကျတညျပွီးလြှငျ ကြောကျကြောလုပျမညျ့ဘနျးထဲကိုထညျ့ရျြအအေးခံပါ။၅။ အေးသှားလြှငျ ကွိုကျနှဈသကျသလိုလှီးရျြ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
Hey Buddy!, I found this information for you: "စားလို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ ကူဖီးလ် ကျောက်ကျောနဲ့ စီလုံလက်ဖက်ရည်ကျောက်ကျော". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/947. Thank you.